दाङमा कृष्णबहादुर महराले देखाए ‘पावर’, लिक भयो ३० लाख मागेको भिडियो (प्रमाणसहित)
ARCHIVE, POLITICS » दाङमा कृष्णबहादुर महराले देखाए ‘पावर’, लिक भयो ३० लाख मागेको भिडियो (प्रमाणसहित)
घोराही - नेकपा (माओवादी केन्द्र)को तर्फबाट दाङ क्षेत्र नं. २ मा प्रतिनिधी सभा उम्मेदवार उपप्रधान एवम् विनाविभागीय मन्त्री कृष्णबहादुर महराले निर्वाचन आचार संहिता विपरितको काम गरेको खुलासा भएको छ ।
महराले निर्वाचन आचार संहिता विपरित मतदाताहरूलाई प्रभावित बनाउने गरेर खेलकुदका लागि अर्थमन्त्रालयका सचिवलाई फोन गरेर पैसा माग गरेका हुन् । उनले अर्थ सचिवलाई दाङको भरतपुरस्थित फुटबल ग्राउण्डबाट फोन गरेर पैसा माग गरेका हुन् ।
‘नमस्कार म कृष्णबहादुर महरा बोल्या’, उनले भने भिडियोमा भनेका छन्, ‘तपाई अहिले अर्थमा हुनुहुन्छ हैन ? दाङमा पुसमा नेश्नल गेम हुँदैछ । फिल्डको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ । २०–२५ लाख देखि ३० लाखसम्म थोरै पैसा दिनु होला । व्यवस्थापकिय तयारीका लागि हो । मन्त्रीलाई पनि भन्छु ।’
रोल्पाबाट दाङमा निर्वाचन लड्न झरेका महराले मन्त्रीको पावर देखाएकोमा विपक्षी दलहरूले आक्रोश जनाएका छन् । उनीहरूले विनाविभागीय मन्त्री बनेर ‘पावर’ देखाएर आचार संहिता उल्लंघन गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
महराको भिडियो माओवादी केन्द्रका समर्थकहरूले आफ्नो फेसबुक वालमा बुधबार अपलोड गरेका हुन् । माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरुले भने उनको प्रशंसा गरिरहेका छन् ।
सामाजिक सन्जालमा उनको यो निर्णयबारे समर्थन र बिरोध दुवै भइरहेको छ । चुनावको मुखैमा मतदाताहरुको मनजित्न यो खेलकुद मैदानका लागि फिल्डबाटै फोन गरेर पैसा माग गर्नुलाई तपाई कसरी लिनुहुन्छ ?